Taabid Cabdi oo lacag badan ku bixinaya baraha bulshada si uu cadaadis saaro Farmaajo - Muqdisho Online
Home Wararka Taabid Cabdi oo lacag badan ku bixinaya baraha bulshada si uu cadaadis...
Thaabid Cabdi ayaa gobolka Banaadir kala baxsaday adduun dhan 5 Milyan oo doollar sida ay ilo xog ogaal ah u xaqiijiyeen MOL. Dadka arrintaan faafinaya marka la eego, waxaa la fahamsan yahay iney tahay aqbaar aan jirin balse culeeska lagu saarayo Farmaajo si uu meel uun uu ugu magacaabo Thaabid.
Previous articleBaaqashada Banaanbaxa ma ahayn guuldaro, wuxuu ahaa guul shacabku awoodoodii ku soo ceshadeen (Faalo)
Next articleXog-Muuse Biixi iyo Deni oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay Dubai (VIDEO)
Farmaajo oo ku amray Gud. Cumar in howlaha dhismaha ku wareejiyo Bashir Goobe, Sabab?
Maxaay tahay sababta uu Farmaajo amar ugu bixiyay in xildhibaanda laga qaado ilaaladooda?
Hooyo haysatay 7 caruur ah oo si naxdin leh ugu geeriyootay Berbera
Wararka Reportor - September 15, 2019
Madaxweyne Farmaajo ayaa dabayaqadii asbuucii hore isugu yeeray kulan gaar ah oo ay ka soo qayb-galeen Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banadir Cumar Filish iyo...
Wararka Faysal - September 15, 2019
Waxaa jira tiro xildhibaano ah oo aad uga soo horjeeda siyaasadda MW Farmaajo iyagoo ku eedeeyay kol hore mar ay ka keeneen mooshin ku...
News MOL - September 15, 2019
Warka aanu ka helayno magaalada Berbera ayaa sheegaya in hal qof oo dumar ah ay ku geeriyootay magaaladaasi, kadib markii uu soo dhacay Taawarada...